Ny kintana Bejeweled dia mamerina firavaka maro sy fitambarana maro | Androidsis
Ny lalao PopCap dia mitondra antsika match-3 miaraka amin'i Bejeweled Stars indray
Lalao PopCap dia fantatry ny rehetra amin'ny zavamaniry vs Zombies izay iray amin'ireo lalao video nilalao indrindra avy amin'ny fitaovana finday. Ireo zombie izay tsy maintsy esorintsika amin'ireo zavamaniry mampihomehy sy mampiavaka ireo dia nahatonga ny mpilalao an-tapitrisany eran'izao tontolo izao handalo ireo ambaratonga rehetra ananany. Ao amin'ny tapany faharoa, Plants Vs Zombies 2, nitondra atiny sy karazany maro kokoa amin'ity andian-dahatsary ity izay nampiakatra ny lalao PopCap ho stardom ary hanana ny toerany eo amin'ny tantaran'ny lalao video izay hohalalinin'ny taranaka ho avy.
Mamerina antsika indray izy ireo ankehitriny match3 amin'ny fomban'ny Candy Crush Saga ary miaraka amin'ireto no tafiditra tanteraka amin'ity sokajy mamokatra ity miaraka amin'ny Bejeweled Stars. Raha ao amin'ny Candy Crush dia misy karazana vatomamy isan-karazany isika, ao amin'ny lohatenin'ny Lalao PopCap dia manana ny firavaka izahay ho mpandray anjara fototra mampitambatra azy ireo ary mamorona ireo vokatra mahavariana indrindra. Izahay dia tsy hahita na inona na inona momba an'io karazana lalao tsy fantatra intsony io, fa ity fanadihadiana ity dia afaka nitondra ny kalitao ankafizin'ny lalao video hafa mba hanana lalao 3 izay mihetsika tsara ary avela hankafizina tsy misy olana fanampiny.
1 Lalao PopCap mazava tsara
2 Mamoha tratra tsy mijanona
Lalao PopCap mazava tsara
Ny PopCap Games dia nandefa ity lalao video ity ny alakamisy lasa teo ary tsy niafina ny hamerina lohateny iray izay tafiditra tanteraka amin'ilay karazana lalao 3 izay ahitantsika vatosoa kely toa ilay natomboka Jewel Road avy amin'ny lalao Crescent Moon. Misento bebe kokoa i Bejeweled ho an'ny aakaikin'ny filalaovana lalao KING, raha tokony hiditra amin'ny RPG kely miaraka amin'io toetra io izay mijery ny tontolo iainana sy izao tontolo izao ao amin'ny Jewel Road. Ny mampiray azy ireo dia firavaka sarobidy.
Bejeweled Stars dia manaraka ireo andiana lalao firavaka izay efa nahazatra ny Lalao PopCap sy ny Lalao Elektronika tsy mamorona zava-baovao ary mitondra zavatra mitovy. Inona no mitranga fa ataon'izy ireo ny lalao ho mavitrika ary ny vokany miampy ny fifangaroana dia mampifandray antsika amin'ny lalao.
Tontolo iray arosony izay handehanantsika mahita firavaka samihafa, fitambarana sy fidirana amin'ireo fahefana ahafahantsika mifehy ny tabilao mihitsy. Azonao atao ny manetsika rahona feno firavaka, misambotra lolo alohan'ny handosiran'izy ireo, na hanjakazaka amin'ireo renirano firavaka.
Mamoha tratra tsy mijanona
Ny iray amin'ireo antsipirian'ny Bejeweled Stars dia ireo tratra, izay azonao atao mahazo ody manokana sy ny emoticons hanehoana ny tenanao tsara kokoa sy handefasana hafatra. Araka ny filazan'izy ireo avy amin'ny pejiny manokana dia misy betsaka amin'izy ireo hahita, noho izany dia fanampiny fanampiny ho famporisihana antsika hilalao izany isan'andro.
ny hery manokana noforonina noho ny firavaka selestialy, dia hahafahantsika miditra amin'ny karazana vokatra rehetra toy ny fitodihana ny tabilao na ny fampiasana ny fitambarana vaovao miaraka amin'ny mixer. Ireo hery ireo dia azonao ampiasaina hampiasainao isaky ny tianao.
Afaka omenao izany maimaimpoana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ireo micropayment mahazatra hitantsika amin'ny lalao maro an'ity fomba ity miaraka amin'ilay maodelim-barotra fantatr'i Freemium.
Ity karazana lalao ity mila misarika ny saina izy ireo, ary raha tena manaitra ny vokany amin'ny feo manaloka noho ny hafaliany sy ny antsipirihany dia vao mainka tsara kokoa Izany dia satria ny andiam-panambarana azontsika dia mety hahatonga ny efijery ho lasa medley misy sary maro samihafa izay saika manaitra antsika amin'ny alina rehefa milalao lalao isika.
Eto no misy ny kintana Bejeweled mahay mamely ny lakile mety ary mahatratra haavon'ny sary sy feo tsara izany. Raha ity karazana lalao 3 ity dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny fotoana nifanarahana izay omen'ny PopCap Games anao avy amin'ny finday avo lenta na takelaka Android.
Volavola tsara amin'ny ambaratonga rehetra
Ny fitambaran'izy ireo mipoaka
Bebe kokoa noho izany
Kintana bejeweled - Jewel Match 3
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao PopCap dia mitondra antsika match-3 miaraka amin'i Bejeweled Stars indray
Sony dia hifantoka amin'ny andiana Xperia X hatramin'ny 2018
Battleborn Tap dia RPG clicker avy amin'ny Lalao 2K izay manana kalitao tsara hita